Ndị ọkachamara na Semalt na-adọ aka ná ntị gbasara ndị Germany na-ama jijiji na-emepụta ihe
ihe otiti nke na-agụnye ozi mgbasa ozi zuru ezu na-echebara ndị mmadụ ozi site na ozi ha. Ndị nnata enweta akwụkwọ ozi email na-eme ka a na-ahaziri na nkọwa nkeonwe. Ozi ịntanetị ndị a nwere aha zuru ezu nke onye nnata, nọmba ekwentị, na adreesị ozi-e.
Andrew Dyhan, ọkachamara ọkachamara site na Semalt , na-emesi obi ike na isiokwu nke ozi-e ndị a bụ na ugwo onye nkwụ ụgwọ maka ụgwọ buru ibu na ozi ahụ na-aga n'ihu na-eyi egwu iziga okwu ahụ na iwu mmanye maọbụ ụlọ ọrụ nchịkọta ma ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ n'ime oge a kapịrị ọnụ. Aha njirimara eji na ozi di iche n'etiti ndi ozo, ma ihe omuma nke onwe ya yiri ya na ma obu ozi ma na ohia.
Ụdị akụkọ a na-ahụ ezigbo ma na-akpali iche iche iji pịa ozi email ahụ - master renkaat hintay. Ndị nchọpụta Symantec kwuru na e mere mwakpo yiri nke ahụ na United Kingdom ma gbasaa n'ọtụtụ n'April, 2016. Na ịpị ozi spam ahụ, malware nwere ike igosipụta ozi ego na-emetụta kọmputa kọmputa. Ozi spam na-enyocha ihe nlele maka ozi gbasara akaụntụ onwe ha na nkọwa ụlọ akụ.
Ihe ka ọtụtụ n'ime ozi ọhụụ ọhụrụ ndị natara anatawo ka edere ha n'asụsụ German. Ụfọdụ ndị na-eme nchọpụta (Symantec) tụnyere ọdịiche dị n'agbata ozi ndị a na ndị zigara na ndị ọzọ na United Kingdom ma chọta otu egwuregwu. Ozi spam na oge abụọ ahụ nwere ozi nkeonwe banyere ọnye a na-etinye na etiti ozi ahụ..Nanị ihe dị iche bụ ozi ezipụ ozi ezigara na United Kingdom nwetara ndị nnata iji pịa njikọ nke na-eduga na saịtị ọjọọ, ma ozi email ndị German nwere ụgwọ dị na ụdị nke .zip. Ọ dị njọ n'ihi na ozi ndị Spam ndị Germany nwere .zip na-agbakwụnye ihe mgbakwunye na - agbakwunye ọzọ .zip Archive attachment.
Ederede German nke spam na-eji faịlụ '.com' zuru ezu. Ejichapụla faịlụ a ọtụtụ n'ime ihe ọmụma ya nke ga-egosi na ọ si malite. Enweghị njirimara malware na faịlụ adịghị eme ka ọ dị mma, ọ bụ malware na-eweta n'oge a. Trojan.Nymaim.B (ihe nchọpụta nke ndị nchọpụta Symantec chọpụtara) jiri usoro mkpofu akpụkpọ ụkwụ siri ike iji gbochie ya ịgba ọsọ na igwe arụmọrụ. Ejiri malware iji zuo ohi, nlekota oru, nzere oba ego na ozi ndi ozo di iche iche mgbe ihe di n'ime ya.
Ozi mmadụ onwe ya na ntanetị ọha na eze na ebe nrụọrụ weebụ na-eji ndị ọrụ spammers eme ihe na nkà ha na izipu ozi ịntanetị na-enweghị atụ. Ịgbalite ịntanetị na ọganihu dị iche iche nke nkà na ụzụ na-etinye ihe ize ndụ nye ndị natara ozi email, a na-atụ anya ụdị ọgụ a na-ebili n'ọdịnihu. Symantec gwara ndị ọrụ email ka ha kpọọ onye na-eziga email iji kwado ozi ọ bụla spam tupu ị rụọ ọrụ na ozi ịntanetị ma ọ bụrụ na ekwenyebere ma ọ bụ na ọ bụ. Ihichapụ ọ bụla enyo na-ele ozi ịntanetị dịkwa mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ha nwere Mgbakwụnye na njikọ. Ịnọgide na-echekwa nchedo nche kọmputa ahụ na-emelite n'oge niile ga-egbochi ihe ize ndụ ahụ ma chebe onye ọrụ ahụ pụọ na mgbanwe ọ bụla dị iche iche nke ọhụrụ. Ịkwụsị ozi ịntanetị, site na iji ọrụ ntanetịime email, nke metụtara ụdị mwakpo a nwere ike ịme ka onye na-enweta email ga - adị mma.